‘सुर्के थैली’ लाई २ करोड, ‘काले दाइ’ लाई कति ? « Ramailo छ
‘सुर्के थैली’ लाई २ करोड, ‘काले दाइ’ लाई कति ?
दिपकराज गिरी र दिपाश्री निरौलाले निर्माण गरेको फिल्म ‘वडा नं ६ ‘को गीत सुर्के थैलीले युट्युवमा २ करोड भ्युअर्स पाएको छ । राजनराज सिवाकोटीको संगीत रहेको गीतलाई २०१६ अगस्ट ६ मा युट्युवमा अपलोड गरिएको थियो । अञ्जु पन्त र संगीतकार तथा शब्दकार सिवाकोटीको स्वर रहेको गीतले २०१७ जुन २९ मा दुई करोड भ्युअर्स पाएको हो । गीतको भिडियो हेर्नुस् :
दुई करोड भ्युअर्ससँगै ‘सुर्के थैली’ युट्युवमा सर्वाधिक हेरिने नेपाली फिल्मको गीत भएको छ । ‘सुर्के थैली’ पछि ‘लुट २’ को ‘ठमेल बजार’ आइटम गीत एक करोड ८० लाख नजिक पुग्न लागेको छ भने फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ को ‘पुर्व पश्चिम’ रेलले डेढ करोड माथि भ्युअर्स पाएको छ । फिल्म ‘पर्व’ को ‘काले दाई’ बोलको आइटम गीतले पनि एक करोड तीस लाख बढी भ्युअर्स पाएको छ । कार्टुन क्रिउ र मेलिना राईको नृत्य रहेको ‘नाईं मलाई थाहा छैन’ बोलको गीतको भिडियोलाई पनि ढेड करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । फिल्म ‘नाईं नभन्नू ल २’ को कम्मर माथि पटुकी पनि एक करोड पुग्न लागेको छ ।